Azia Atsimo Atsinanana: Ny kiraro, ny kiraro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2018 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, bahasa Indonesia, বাংলা, Español, عربي, Français, English
Ho malaza hatrany ho toy ny mpitoraka kiraro ilay mpanao gazety Irakiana Muntadar al-Zaidi. Izy izay nahomby tamin'ny fitorahana kiraro roa teny amin'ny filoha Amerikana George Bush tamin'ny Alahady lasa teo tany Baghdad.
Sarobidy ireo kiraro ankehitriny. Nanolo-bidy 10 tapitrisa dolara ho an'ny ila-kiraro ny mpandraharaha Saodiana iray.
Nanandratra ity tranga fitorahana kiraro ity ho mahery fo ny olona maro manerantany, indrindra ireo izay nanohitra ny politika raharaham-bahinin'ny filoham-pirenena Amerikana teo aloha. Inona avy ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogera sy mponina any Azia Atsimo Atsinanana?
Hafriz avy ao Singapaoro mihevitra fa tokony ho lasa filohan'izao tontolo izao i al-Zaidi :
“Mbola misy olona tsy taitra tamin'ilay fitorahana kiraro ve? Mahery fo manerantany ity lehilahy Muntazer al-Zaidi ity. Tokony ho filohan'izao tontolo izao izy. “
Katak, avy any Singapaoro, nanamarika fa maneho ny tsy fahombiazan'ny politika raharaham-bahiny Amerikana ity tranga ity:
“Amin'ny ankapobeny, tsy veloma farany mahafinaritra ho an'izay heverina ho toy ny Filohan'”izao tontolo izao” ny malaza ratsy any amin'ny firenena vahiny.
“Mampiseho ny habetsahan'ny fankahalana sy ny herisetra izay tsy maintsy niaretan'ireo olom-pirenena teo an-toerana noho ny tsy fahombiazany tamin'ny fanombanana ny politikan'ny raharaham-bahiny, indrindra fa ny fanafihana an'i Iràka tamin'ny taona 2003″ ny (zava-nitranga).
Bilaogera Singaporeana iray hafa, mrbrown.com, manontany tena hoe nahoana ireo mpiasan'ny Sampam-pitsikilovana no tsy nahavita nisambotra ny kiraro:
“Mampanontany tena anao izany, fa raha tsy afaka nanakana ilay kiraro iray na roa tsy hanidina ny Sampam-pitsikilovana, ahoana ny fomba handaminan'izy ireo ny fiarovana ny filoha Bush amin'ny fitaovam-piadiana mahafaty kokoa?
“Sa ve navelan'izy ireo hitranga mihitsy izany?” Hmmm … “
Carlos Conde, mpanao gazety Filipiana, nanadihady ny tranga fanipazana kiraro tamin'ny fomba fijerin'ny olona ao amin'ny media:
“Ny zavatra nataony dia ny hanehoana fa olom-pirenena izy alohan'ny zavatra hafa, ary izy koa dia mahatsapa ny fahorian'ny Irakiana mpiray tanindrazana aminy.
“Mpanao gazety i Al-Zaidi. Fantany mihoatra noho ny olon-kafa angamba ny tantaran'i Irak. Saingy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, olom-pirenena Irakiana izy, mahatsapa ny fanaintainan'ny vahoakany mihoatra noho ny mpanao gazety rehetra ao Baghdad. Tena nanantena azy hipetraka fotsiny sy hijery an'i Bush handainga indray sy hanevateva ny fahatsiarovan'ireo izay nijaly tany Iràka noho ny hetsika herisetra nataon'ny Amerikana ve isika? “
Ka-Blog avy ao Filipina mahatakatra ny antony nanosika an'i Al-Zaidi:
“Nohamarinina tamin'ny fanaovana izany ve i Al-Zeidi? Avelao aho hihevitra tahaka izany – raha toa ka ravan'ny ady nohamarinina tamin'ny fiampangana tsy misy fototra velively (WMD) ny firenenao, raha mpiray tanindrazana aminao an-tapitrisany no maty noho izany, raha mbola mibodo ny firenenao ireo vahiny mpiherisetra, ary raha mbola manohy milaza amin'ny firenenao fa marina ny atidoha (tsy mifanaraka intsony ny teny) ao ambadik'ireny rehetra ireny, tsy hahatsapa fahatezerana mitovy amin'ny tsapan'ity mpanao gazety ity ve ianao?
“Nahatezitra ahy ny zavatra hitako tao amin'ny fahitalavitra ary mbola nanohina ahy raha namerina nijery izany tao amin'ny YouTube aho. Nanontany tena aho hoe nahoana no noraisina tamin'izany fomba izany ny filohan'i Etazonia.
“Saingy raha mametraka ny tenako ao anatin'ny kiraron'i Al-Zeidi aho (fanahy iniana ny kilalaon-teny), dia tsy mahavita miampanga azy. Raha ny marina, ny olako tokana amin'ity mpanao gazety Irakiana ity dia ny tanjony.”
Arif avy any Indonezia manoratra fa ny filoha Amerikana voafidy Barack Obama dia tokony hanavotra ny sarin'i Amerika izay noravan'ny teo alohany:
“Tsapa ao am-pon'izao tontolo izao ny fankahalana. Ny fitorahana kiraro dia fanehoana ny fankahalàn'izao tontolo izao fotsiny. Eritrereto fa tsy maintsy manarina ny endrin'i Amerika izay nosimban'i George Walker Bush i Barack Obama.
“Tsy dia misy dikany ny voatoraka kiraro. Saingy, tokony hieritreritra i Bush fa namorona endrika ratsy sy fankahalàna izy.” Nopotehin'i Bush ihany koa ny ampahan'ny vakok'i Iràka. “Nandrava ny zava-bita ara-toe-karena izy ary nandainga tamintsika.” Tsy nanana fitaovam-piadiana mahery vaika i Iraka. “
Angamba fihetsika ratsy ataon'ny manampahefana ny mitsinjo mialoha, matahotra i Salak avy any Malaysia fa “mila mahazo fahazoan-dàlana ho an'ny kiraro isika indray andro any.”
Bilaogera Aziatika Atsimo Atsinanana maro no nientanentana tamin'ny lalao madinika izay nateraky ny tranga fitorahana kiraro. Aseho eto ambany ny santionan'ny lahatsary amin'izany: